အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း ဇူလိုင် ၂၀၁၄ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Choice » အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း ဇူလိုင် ၂၀၁၄
အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း ဇူလိုင် ၂၀၁၄
Posted by kai on Jul 7, 2014 in Editor's Choice, Myanmar Gazette | 20 comments
သတင်းထောက်နှင့် သတင်းဌာနများကို ခြိမ်းခြောက်မှုများရှိနေ
By ထွန်းခိုင်Mon, 2014-07-07 06:05
မန္တလေးပဋိပက္ခတွင် သတင်းထောက်များကို ပစ်မှတ် ထားခြိမ်းခြောက်မှုများ ရှိနေပြီး ယင်း ခြိမ်းခြောက်မှုများအား အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးရန် စာ နယ်ဇင်းအဖွဲ့အစည်းများမှ တစ် ဆင့် အစိုးရထံတောင်းဆိုသွား မည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန် အခြေစိုက် သတင်းဌာနများက ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းက စတင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် မန္တလေးပဋိပက္ခ များအတွင်း အခင်းဖြစ်ပွားရာ နေရာများသို့ သွားရောက် သတင်းရယူနေသော သတင်းထောက် များအား ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးကာ ယင်းသတင်းထောက်များအား တိုက်ခိုက်မှုများ ပြုလုပ်ရန် လှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့် သတင်းဌာနများအားနည်းမျိုးစုံဖြင့် ခြိမ်းခြောက်ခြင်းများစွာ ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည်။
‘‘အဓိကခြိမ်းခြောက်တာက တော့ သူတို့မကြိုက်တဲ့ သတင်း တွေ ဖော်ပြနေလို့ပဲ။ ကျင့်ဝတ် ညီတယ်၊ မညီဘူးသူတို့ပြောနေ တာမဟုတ်ဘူး။ သူတို့လည်း နားမ လည်ဘူး။ မီဒီယာကျင့်ဝတ်ဆို တာ ဘာလဲဆိုတာ စွပ်စွဲနေတဲ့သူ တွေက မသိဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ စွပ်စွဲနေတာက ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ မီဒီယာတွေက ဒီလိုမျိုးဖော်ပြနေ တာ သူတို့မကြိုက်ဘူး’’ဟု ဦးနေ သန်မောင်ကပြောသည်။
သတင်းမီဒီယာများကို ခြိမ်းခြောက်သူများသည် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင်သာမက အီးမေးလ်၊ ဖုန်းစသည်တို့ဖြင့်လည်း ခြိမ်း ခြောက်မှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိ သည်။
ရန်ကုန်အခြေစိုက်7Day သတင်းဌာနကိုလည်း အီးမေးလ်မှတစ်ဆင့် မန္တလေးမြို့ခံ အယောင် ဆောင်ကာ ခြိမ်းခြောက်သည့် စာ များပေးပို့ခဲ့သည်။
‘‘မီဒီယာကျင့်ဝတ်တွေ၊ သတင်းစာကျင့်ဝတ်တွေ၊ ဘာတွေလာမပြောမနေနဲ့။ မင်းတို့ သတင်းထောက်တွေ သတ္တိရှိရင် ညဘက်ကျုံးဘေးလာခဲ့။ ကုလားဘက်ပါမယ်တော့မကြံနဲ့။ မန္တလေးသားတွေ အကြောင်းသိစေရမယ်’’ဟု မန္တလေးမှပေးပို့သည့် ပုံစံဖြင့် tunmrat@gmail.com အမည်ဖြင့် အီးမေးလ်ပေးပို့ကာ ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။ အုပ်စုတစ်စုက နိုင်ငံရေး ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ခြိမ်းခြောက်စာ များကို အီးမေးလ်ဖြင့်ဖြစ်စေဖေ့စ် ဘွတ်ခ်မှ တစ်ဆင့်ဖြစ်စေ မကြာ ခဏရေးသားပေးပို့မှုများ လက်ခံ ရှိကြောင်း ကမာရွတ်မီဒီယာမှ ဦး နေသန်မောင်ကပြောသည်။
‘‘ဒီကိစ္စက မြန်မာပြည်ရဲ့ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်ကိုလည်း အကြီးအ ကျယ်ခြိမ်းခြောက်နေတာဖြစ် တယ်။ ပြည်သူအားလုံးရဲ့ သတင်းရပိုင်ခွင့်ကိုလည်း ခြိမ်းခြောက် တာဖြစ်မယ်။ အဲဒီခြိမ်းခြောက် နေတဲ့ လူတစ်စုက တစ်စုတည်း ပဲ။ မြန်မာပြည်မှာ အဲဒီဟာ အစိုး ရသိတယ်။ သူတို့ဖော်နိုင်တယ်။ အဲဒီတစ်စုတည်းကမျိုးစုံပတ်ပြီး လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ဒုက္ခပေးနေတာ။ ဒါအန္တရာယ်ရှိတယ်’’ဟု ဦးနေသန်မောင်ကပြောသည်။
သတင်းမီဒီယာများအား ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိစနစ်တကျတိုက် ခိုက်ခြိမ်းခြောက်မှုများကို နိုင်ငံ တကာရှိသတင်းထောက်များနှင့် မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့် အကာအ ကွယ်ပေးသည့်အဖွဲ့အစည်းများ သို့ အကြောင်းကြားထားကြောင်း ဧရာဝတီသတင်းဌာနမှ ဦးရဲနည် ကပြောသည်။
‘‘ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ သတင်း စာနဲ့ စာနယ်ဇင်းကိစ္စလုပ်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ အနေနဲ့က လည်း ဒီကိစ္စတွေကို အသိအမှတ် ပြုပြီး သတင်းထောက်တွေရဲ့ အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးလုပ် ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်’’ဟု ဦးရဲနည်ကပြောသည်။
ကမာရွတ်မီဒီယာမှ တင်ပြ ထားသည့် သတင်းများ၏ အောက်တွင် လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး၊ လိင်စသည့်အကြောင်းအရာ များကို အကြောင်းပြုပြီး အမုန်း တရားများ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်မှုများပြုလုပ်ခြင်းစသည်တို့ကို ပြုလုပ်သူများကို မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း၊ သုံးစွဲသူ စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ခြင်းများ ပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်း၊ ၎င်းတို့ကို စာရင်းပြုစုပြီး လုံလောက်သည့်အချိန်တွင် အရေးယူနိုင်ရန် အစိုးရထံ တင်ပြမည်ဖြစ်ကြောင်း ကမာရွတ်မီဒီယာမှ ဦးနေသန်မောင်က ပြောသည်။
မြန်မာ့မူးယစ် စီးပွါး အစိုးရ GDP ထက် ကြီးထွား
26 June 2014 21:48(+0630) (လွန်ခဲ့သော4နာရီ ခန့်က)
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှု လည်ပတ်ငွေပမာဏဟာ ခန့်မှန်းခြေ အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်း ၉ သောင်းရှိတယ်လို့ အရှေ့တောင်အာရှနဲ့ ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာ UNODC ကိုယ်စားလှယ် Jeremy Douglas ကပြောပါတယ်။
“ဒေါ်လာသန်းပေါင်း ၉ သောင်းဆိုတာဟာ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ တရားဝင် GDP ပြည်တွင်းအသားတင်ထုတ်လုပ်မှု ပမာဏထက်အများကြီးပိုပါတယ်။ အိမ်နီးချင်း မဲခေါင်မြစ်ဝှမ်းဒေသတောင်ပိုင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ GDP ထက်လည်း အများကြီး သာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီငွေစီးဆင်းမှုဟာ ဒေသတွင်း စီးပွားရေး အင်အားအကြီးမားဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။”
အာရှနိုင်ငံတွေမှာ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအခြေအနေကိုလည်း UNODC က အခုလိုသုံးသပ်ပါတယ်။
2014-06-30 15:10 Xinhua
U Thein Sein said China’s development has brought opportunities for Myanmar and Asia asawhole.
Myanmar is ready to join hands with China to inherit and carry forward the spirit of the Five Principles of Peaceful Coexistence, to well implement their cooperation agreements and to expand cooperation in such areas as trade, energy and infrastructure construction.
အင်အားကြီး တရုတ်နိုင်ငံ၊ အမျိုးသားရေးပါတီ အာဏာရ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ စစ်တပ်အာဏာသိမ်း ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် ဘာသာရေးအစွန်းရောက် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတို့ ၀န်းရံနေသဖြင့် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းမှု အောင်မြင်ရန် ခက်ခက်ခဲခဲ ကြိုးစားရမည်ဟု မြန်မာ့အရေး လေ့လာနေသည့် The Educational Initiatives မှ ကျောင်းအုပ်ကြီး Mr. Igor Blazevic ပြောကြား
– See more at: http://news-eleven.com/politic/
သူကြီးရဲ့ အ​ရောင်​ရင့်​မှတ်​တမ်းကို နှစ်​​ပေါင်း ၉၀ ​စောပြီးဖတ်​ရတယ်​။
Time machine ​ကြောင့်​ထင်​တယ်​။
တို့တွေ အနာဂတ်ကို ခရီးသွားကြတာပေါ့
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၅ဝ ကျော် ၁၉၆၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့ က အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီ ဦးနေဝင်း အစိုးရက သမိုင်းဝင် ကျောင်း သား သမဂ္ဂ အဆောက်အဦကို မိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခဲ့ကာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား
တွေ ရာနဲ့ချီ အသက်ဆုံးရှုံး၊ ဘဝ ပျက်ခဲ့ကြတာ ဒီနေ့ထိ မမေ့နိုင်ကြသေးပါဘူး။
အမှတ်မမှားရင်.. အဲဒီခေတ်အချိန်က.. ဘိုခင်ညွှန့်.. ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တက်နေခဲ့တယ်..။
သမဂ္ဂတုိက်ကို.. ဗုံးခွဲတော့.. သူက.. တပ်ထဲဝင်သွားပြီထင်တာပဲ..
သူ့အာဏာကိုင်.. အလှည့်ကျတော့.. တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေဖြိုတာမှ.. ရက်ရက်စက်စက်….။
သမဂ္ဂတိုက်ကို.. ဗုံးခွဲတာမှာ. သမိုင်းတရားခံအဖြစ်.. ဘိုနေ၀င်းကတာဝန်မယူ.. ဘိုအောင်ကြီးကို.. ဘောလီဘောပုတ်…။ အပြန်အလှန်ပုတ်ရင်းနဲ့.. ၂ကောင်.. အဲ..အဲ..၂ယောက်လုံးကြွကုန်ကြပါရောလား..
Pope Francis apologizes to abuse victims at Vatican Mass …
15 hours ago – This may be the first time that Francis has met with the abuse victims, but it’s not the first apology from Francis or fromaPope. The Associated …
နောက်လိုက်ကိုးကွယ်သူ ဘီလီယန်ချီရှိတဲ့.. သာသနာပိုင်ပုပ်ရဟန်းမင်းကတောင်းပန်တဲ့အကြောင်း.. သတင်းပါ…
ချခ်ျဘုန်းကြီးတွေ.. ကလေးတွေနဲ့လိင်ဆက်ဆံတာကို.. အကြောင်းပြုတောင်းပန်ခြင်းဖြစ်တာပါ။
မေတ္တာရှင်ဆရာတော်က ရဟန်းဘ၀ကို စွန့်လွှတ်တာကတော့
ရဟန်းဘ၀ထက် ပိုမြတ်နိုး ပိုတောင့်တ တာကို လိုချင်လို့ဖြစ်မယ်လို့
ကျုပ် အတတ် ဟော လိုက်ချင်ကြောင်း…
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး နှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန(လ၀က) ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးခင်ရီကို ဧရာဝတီ သတင်းထောက် မေခ က တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခဲ့တာကို ဖော်ပြ လိုက်ပါတယ်။
“လူတွေက မြေကြီးကနေ မထွက်ပါဘူး”
ဧရာဝတီ| July 9, 2014 |
မေး။ ။ ဒီ သန်းခေါင်စာရင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူတွေက မျှော်လင့်နေတာ ရှိတယ်။ သန်းခေါင်စာရင်းကလည်း တော်တော်လေး ကို အခြေခံကျကျ ကောက်ခဲ့တာဆိုတော့ ဒီကနေ တရားမဝင် နေထိုင်သူတွေ ရှိနေတာကို ပေါ်ပေါက်နိုင် မလား။ ဒါကို ပြည်သူတွေ သိချင်တယ်။ ဒါတွေကို ပေါ်လာရင် ဘယ်လို ဆုံးဖြတ်မလဲ။ ဘယ်လောက် အတိုင်းအတာထိ ရှိနေမယ် ထင်ထားပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ ရှိနေမယ်ဆို ပေါ်မှာပါ။ ဒါကို ကျနော်တို့ တည်ဆဲ ဥပဒေတွေနဲ့ အရေးယူမှာပါ။ ဒီမှာ နိုင်ငံသားကို နားလည် စေချင်ပါတယ်။ ၈၂ ဥပဒေအရ ၁၈၂၃ မတိုင်မီမှာ ပင်းရင်းနိုင်ငံ အနေနဲ့ မှီတင်းနေထိုင်သူတွေ ရှိပါတယ်။ မျိုးနွယ်စု ၈ မျိုး။ ဒါတွေက မွေးရာပါ နိုင်ငံ သားပါ။ ဒီကနေ တဆင့်တဆင့် ခွဲထွက်လာတဲ့ မျိုးနွယ်စုတိုင်းဟာ မွေးရာပါ နိုင်ငံသားလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါတွေကို နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်အနီရောင် ပေးပါတယ်။
ဒီမှာ တချို့ကတော့ ဒီလိုမျိုးပါတာ မရှိပေမယ့် ဥပဒေအရ နိုင်ငံသား ဖြစ်တာ ရှိပါတယ်။ ဥပမာ ၁၉၄၈ မှာ အဘိုးအဘွား နေပါတယ်။ အဖေအမေ ဒီမှာ မွေးပါတယ်။ သူကိုယ်တိုင်လည်း ဒီမှာ မွေးပါတယ်၊ ကြီးတယ်။ သူဟာ ပြောရရင် မျိုးဆက် ၃ ခု အနေနဲ့ ဒီမှာ ရှိခဲ့ တာပါ။ ဒါဆို သူက နိုင်ငံသား လျှောက်ချင်ရင် လျှောက်ခွင့် ရှိပါတယ်။ အဆင့်ဆင့် စစ်ဆေးပြီး နေထိုင်ခဲ့တာ သေချာရင်ပေးပါတယ်။ ၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံသား ဥပဒေအရ တရားဝင် လျှောက်လာရင် တရားဝင် စစ်ဆေးပါတယ်။ အစိုးရအဖွဲ့ကို တင်ပါတယ်။ မကျေနပ်ရင် အယူခံ ဝင်နိုင်ပါတယ်။ အတည်ပြုလိုက်လို့ နိုင်ငံသား ဖြစ်လာရင် သူက ဥပဒေအရ ဖြစ်လာတဲ့ နိုင်ငံသားပါ။ သူကလည်း အနီရောင်ကတ် ကိုင်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
မေး။ ။ ဒါဆို ရိုဟင်ဂျာတွေကိုကော ဘယ်လို ဆုံးဖြတ်ထားပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ ဘင်္ဂါလီ ဆိုတာကိုက ကျနော်တို့ အရင်မှတ်တမ်းတွေမှာ မှတ်တမ်း တင်ထားခဲ့တာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါကိုတော့ သူတို့ကို သတ်မှတ်နိုင်ငံသား ဥပဒေအတိုင်း လျှောက်ခွင့်ကတော့ ဥပဒေအရ လက်ခံပေးနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ရိုဟင်ဂျာကိုတော့ ဘယ်တော့မှ လက်ခံမှာ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့ကိုက လျှောက်ခွင့် မရှိပါဘူး။
san san tint says:
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောတဲ့ သား ၂ ယောက် နိုင်ငံခြားသား ဖြစ်ရပုံ
Posted by Irrawaddy on July 14, 2014
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့တုန်း က ပခုက္ကူ မှာ ကျင်းပတဲ့ ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေး လူထု ပညာပေး ဟောပြောပွဲမှာ ပုဒ်မ ၅၉ ဆိုတဲ့ သမ္မတ ဖြစ်ခွင့် တားမြစ်ထားတဲ့ ဥပဒေအကြောင်းလည်း ထည့်သွင်းပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။
ပခုက္ကူ လူထုဟောပြောပွဲမှာ တွေ့ရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဓာတ်ပုံ – NLD
အဲဒီ ဥပဒေအရ သမ္မတ ဖြစ်ရမယ့် သူရဲ့ သား၊ သမီး ချွေးမ၊ သားမက် စတဲ့ သူတွေဟာ နိုင်ငံခြားသားဖြစ် အဲဒီသူဟာ သမ္မတ ဖြစ်ခွင့် မရှိဘူးလို့ ပုဒ်မ ၅၉ စ က ကန့်သတ်ထားတာပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ သား ၂ ဦး နိုင်ငံခြားသား ဖြစ်လို့ သမ္မတ ဖြစ်ခွင့် မရှိဘူးလို့ ပြဋ္ဌာန်းထားချက် အပေါ် အခုလို တုံ့ပြန်ထားပါတယ်။
” တချို့က ပြောကြတယ်၊ ကျမ သား ၂ ယောက် က မြန်မာနိုင်ငံသား ခံယူလိုက်ရင် ကျမ သမ္မတ ဖြစ်လို့ ရပြီပေါ့။ ကျမ ပြောမယ်။ ကျမ သမ္မတ ဖြစ်တာ မဖြစ်တာက အဓိက မဟုတ်ဘူး။ အဓိက က ဥပဒေကြောင်း အရ မမျှတလို့ ပြင်တာ။ ဘယ်လို မကြိုက်တာလည်း ပြောရင် ကျမ သားတွေက နဂိုက မြန်မာနိုင်ငံသား လက်မှတ်ရနေပြီး ၁၉၉၈ ခုနှစ် နောက်ပိုင်း ကျမ အကျယ်ချုပ် ကျတော့ ကျမသားတွေကို အရင်အစိုးရ က နိုင်ငံသား လက်မှတ်တွေကို ရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်း ကျမ သားတွေ ဗြိတိန်နိုင်ငံသား ဖြစ် သွားတယ်” လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောသွားပါတယ်။
Myanmar Gazette July_Aug 2014
ဇီဇီ၏ မန်မန်း( ထမင်းဆိုင်တွင်ပါဝင်ရေးသား ချက်ပြုတ်သူများ ခရက်ဒစ်ကိုယ်စီနှင့်တကွ)
ဂီဂီ၏ လုံးလုံး ( ဖီဖာ ၂၀၁၄ ဘော်လုံးအကြောင်း)
ဘလက်ချော၏ တင်းတင်း (အနုပညာသမားသတင်းများ)
ဂျီးဂျီး ကို ကျေးကျေး..!
Miss Asian Global နဲ့ Miss Asian America အလှမယ် ရွေးပွဲတွင် Bay Area နေ မြန်မာဇာတိနွယ် ဆုရသင်္ကြန်အလှမယ် နှစ်ဦးလည်း ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည် ဖြစ်ပြီး လက်ရွေးစင် ဆန်ကာတင် ၂၈ ဦးတွင် ပါဝင်နေပါတယ်။ အပြီးသတ် ရွေးချယ်ပွဲကို ဩဂုတ် ၂ ရက်၊ စနေနေ့ ညနေတွင် ကျင်းပမယ်လို့သိရပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲအတွက် လိုအပ်ချက်တစ်ခု ဖြစ်သော လူထုအကြိုက် (People’s Choice) ကို အများမဲဖြင့် ဆုံးဖြတ်မည် ဖြစ်ရာ မြန်မာများ၏ ဝိုင်းဝန်းကူညီမှု လိုအပ်ပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် အောက်ပါလင်ခ့်ကနေ FaceBook ကတဆင့် မဲပေးကြစေလိုပါကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
မဲပေးရန်အတွက် Facebook သွား၍ Like ကို အရင်ဆုံးနှိပ်ရပါမယ်။
Like ကို နှိပ်ပြီးမှ မဲပေးရမည့် အလှမယ်များ၏ ဓာတ်ပုံနှင့် Vote ခလုတ် ပေါ်လာပါမယ်။
အဲဒီအခါမှ မြန်မာအလှမယ်နှစ်ဦး၏ အမည် May Ling Phyu သို့မဟုတ် Lu Ann Shwe ကို ရှာကာ မိမိနှစ်သက်ရာ တစ်ဦး၏ ဓာတ်ပုံအောက်ရှိ Vote ခလုတ်ကို နှိပ်ပေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာဇာတိနွယ် မယ်၂ဦးကတော့ မေလင်းဖြူ (May Ling Phyu) လူ အင်န် ရွှေ (Lu Ann Shwe)တို့ဖြစ်ပါတယ်။
မေး – လူ့ဘဝဖြတ်သန်းချိန်မှာ ပြည်ပနိုင်ငံမှာပဲ နိုင်ငံခြားစာနဲ့ မြန်မာစာပေကိစ္စတွေ၊ ပရဟိတလုပ်ဖို့အ တွက်တွေကြိုးစားတော့မယ်ဆိုတော့ ဆရာတစ်ယောက်တည်း ဘယ်လိုဖြတ်သန်းမလဲ။ ဘဝအဖော် မွန်ရှာဖို့ရောစိတ်ကူးရှိပါသလား။ ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကော ဘယ်လိုလူမျိုးကိုရွေးချယ်မှာပါလဲ။
ဖြေ – ဘဝအဖော်မွန်ရှာတွေ့လို့လက်ထပ်ပြီးပါပြီ။ စိတ်ကောင်းရှိပြီး စာပေအလုပ်ကို ရာနှုန်းပြည့် ကူညီနိုင်မယ့်ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါ။
မေး – တခြားရဟန်းတွေလူဝတ်လဲတာတွေအများကြီးတွေ့ခဲ့ကြားခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဆရာမေတ္တာရှင်(ရွှေပြည် သာ)လူဝတ်လဲခါမှ သတင်းစာထဲမှာလူသိရှင်ကြား ဘာကြောင့်ကြေညာရတာပါလဲ။
ဖြေ – ရိုးသားချင်လို့ပါ။ လူမသိအောင်လူဝတ်လဲထားပြီး ရဟန်းအမှတ်နဲ့မှိန်းပြီး လက်ခံရင်မရိုးသားတော့ပါ ဘူး။ လူဝတ်လဲပြီးတာကိုသိလျက်နဲ့မေတ္တာ၊ ကရုဏာဆိုတာ နာမ်တရာသဘောတရားသက်သက်လေး ပဲလေ။ ရုပ်တရားမှ မဟုတ်ပဲ။ ဒါကြောင့် အဝတ်ပြောင်းရုံနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာပွားများလာတဲ့ မေတ္တာတရား ဟာ ပျောက်မသွားနိုင်ဘူးလို့တွေးခေါ်လက်ခံနိုင်သူများက အရင်အတိုင်းပရဟိတအတွက် လာလှူလို့ လက်ခံရင်ရိုးသားရာရောက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကြေညာရတာပါ။ နောက်တစ်ချက်က ရဟန်းဘဝက ပစ္စည်းငွေ ကြေးတွေကို ရဟန်းဘဝမှာပဲထားခဲ့သင့်တယ်။ သို့မဟုတ် အများအကျိုး အတွက် လှူခဲ့သင့် တယ်ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်လေးကိုလူဝတ်လဲသူတိုင်းရစေ ချင်လို့လဲကြေညာရတာပါ။ တချို့သော ရဟန်းတွေက လူဝတ်လဲရင် ဝတ္ထုငွေ ကြေးမပြောနဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုတောင်ရောင်းစားသွားတတ်လို့ စံနမူနာ ပြဖြစ်ချင်လို့လည်း အခုလိုကြေညာရတာပါ။
International Religious Freedom Report for 2013
History shows that nations that uphold the rights of their people — including the freedom of religion — are ultimately more just and more peaceful and more successful. Nations that do not uphold these rights sow the bitter seeds of instability and violence and extremism. President Barack Obama
In 2013, the world witnessed the largest displacement of religious communities in recent memory. In almost every corner of the globe, millions of Christians, Muslims, Hindus, and others representingarange of faiths were forced from their homes on account of their religious beliefs. Out of fear or by force, entire neighborhoods are emptying of residents. Communities are disappearing from their traditional and historic homes and dispersing across the geographic map. In conflict zones, in particular, this mass displacement has becomeapernicious norm.
In Syria, as in much of the Middle East, the Christian presence is becomingashadow of its former self. After three years of civil war, hundreds of thousands fled the country desperate to escape the ongoing violence perpetrated by the government and extremist groups alike. In the city of Homs the number of Christians dwindled to as few as 1,000 from approximately 160,000 prior to the conflict. Elsewhere, in the Central African Republic, widespread lawlessness and an upsurge in sectarian violence between Christians and Muslims reportedly resulted in at least 700 deaths in Bangui in December alone and the displacement of more than one million people throughout the country during the year.
Anti-Muslim violence in Meikhtila, Burma, led to up to 100 deaths and an estimated 12,000 displaced residents from the area in early 2013. This event showed that mob violence against Muslims was no longer confined to western Rakhine State, where over 140,000 persons have also been displaced since 2012. Although the government’s overall human rights record continued to improve, organized anti-Muslim hate speech, harassment, and discrimination against Muslims continued, exploited by those seeking to divide and pit Buddhist and Muslim communities against one another, often for political gain.
– See more at: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
မန်မာနိုင်ငံသည် ဘာ သာရေးအကြမ်းဖက်မှုများနှင့် ဘာသာရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုများ ကြောင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွက် ဘာ သာရေးလွတ်လပ်ခွင့် အထူးစိုး ရိမ်ရသော နိုင်ငံများစာရင်းတွင် ပါဝင်နေကြောင်း အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ် ပြန်လိုက်သည့် အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြသည်။
ဇူလိုင် ၂၈ ရက်တွင် ထုတ် ပြန်ခဲ့သည့် ဘာသာရေး လွတ်လပ် ခွင့်အစီရင်ခံစာတွင် ယင်းသို့ဖော် ပြထားခြင်းဖြစ်ပြီး ဘာသာရေးအကြမ်းဖက်မှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့သော တရုတ်၊ မြောက်ကိုရီးယား၊ အီရန်၊ ဆူဒန်၊ ဆီးရီးယား၊ ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားနိုင်ငံတို့နှင့်အတူ မြန်မာကို ယှဉ်တွဲဖော်ပြထားသည်။
မြန်မာသည် ဘာသာရေး လွတ်လပ်ခွင့် အထူးစိုးရိမ်ရသော နိုင်ငံအဖြစ် ၁၉၉၉ခုနှစ်ကတည်းက သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပြီး အစိုးရသစ် လက်ထက် ၂၀၁၁ သြဂုတ်လတွင် စာရင်းထဲ ဆက်လက်ထည့်သွင်းရန် အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာနက ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
၂၀၁၃ ဘာသာရေးဖိနှိပ်တဲ့နိုင်ငံတွေစာရင်ထဲ.. မြန်မာပြည်က.. ပထမစာမျက်နှာမှာ.. ပြည်တွင်းစစ်ကြီးထဖြစ်နေတဲ့.. ဆီးရီးယားနဲ့အတူတူပါလာပြန်ပြီ…
တကမ္ဘာလုံးကပြသနာကို.. မြန်မာပြည်ထဲဆွဲသွင်းရဲတဲ့.. သခင်မျိုးဟေ့.. ဒို့ဗမာကွ..
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဘုန်းကြီးတွေလည်း… ထေရ၀ါဒ.. ကွ..။
လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ယုံကြည့်ခွင့်ပြဌာန်းထားတဲ့.. အခြေခံဥပဒေအပေါ်က.. မဟန.. ကွ..။